याे देश दलहरूको मात्र हो कि जनताको पनि ? कता जाँदैछ देश ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
काठमाडौँ । दुग्ध व्यवसायी कृषकहरु यो देशमा मिल्क होलिडे गर्दा गर्दा थाके । अहिले यो देशमा मिल्क होलिडे कतै सुनिँदैन । न त सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाएको नै कतै देख्न र सुन्न पाइन्छ । तर अब देशलाई मात्र नभइ संसारलाई नै चकित पार्ने गरि यो देशमा बजेट होलिडे भएको छ ।
इतिहासमा कहिले कतै नसुनिएको यो होलिडेले नेपालको अवस्था र व्यवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ । दलहरु दलदलमा फस्दा देशलाई पनि कसरी दलदलमा फसाउँदा रहेछन् भन्ने यही बजेट होलिडे चरितार्थ गरेको छ । अब न कर्मचारीको तलव, न सांसदको, नत प्रधानमन्त्रीको तलव नै खल्तीमा पस्ने भयो । साइत पनि कस्तो जुरेको –महिना मर्न लागेको दिन अझ भनौ नेपाली शैली र परम्परा अनुसार तलव थाप्न लागेको दिन नै बजेट होलिडे भइदिएपछि देश जताततै अब केही दिन उधारो र सापटीमा चल्ने भएको छ ।
दलहरुबीच असमझदारीले हद नाघ्दा मुलुक आर्थिक सटडाउनको अवस्थामा पुग्यो । अब सरकारले कर उठाउन पाउने भयो तर तलव भत्ता बाड्न नपाउने भयो । तर हिजो बुधबार एकै दिन सरकारी ढुकुटीबाट सरकारले १४ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ झिकेर खर्च गरिसकेको छ । जुन रकम कता कता पुग्यो, खुसी हुने वर्ग पक्कै भेटिएला, त्यसपछि थाहा हुनेछ कि- ए यिनीहरुको काम र दाम चै भएछ भन्ने । तर अब साह्राे छ र गाह्राे पनि उत्तिकै छ ।
सर्वसाधारणले आफ्नो गोजी टाँट हुँदा भोग्ने समस्या र अनुहार नै नियाउरो पार्नु पर्ने अवस्था अब सरकारले भोग्नु पर्ने अवस्था आइपरेको छ । संघीय संसदको बैठक असोज चार गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएकोले अब सरकारले चार गतेसम्म चारोको व्यवस्थाका लागि सरकारी ढुकुटी खोल्न नपाउने भएको छ । तर त्यो चार गतेपनि प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न नसके सरकार अर्को विकल्प खोज्न बाध्य हुने छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक कुनै पनि हालतमा पास हुने अवस्था छैन् । संसदको अवरोध बनेर उभिएको नेकपा एमालेले त्यो प्रतिस्थापन विघेयकमा माधवकुमार नेपालको फोटो टाँसिएको देखेको छ । त्यही विधेयकमा उस्ले आफ्नो हार देखेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए आफु सकिने संकेत देखेको छ उस्ले । उस्ले न त्यहाँ देश र जनताको स्वार्थ देखेको छ नत देश र जनताको भलो नै । मात्र आफ्नो हार देखेको एमालेले विधेयक पारित हुने अवस्था आउन मरे पनि नदिन पक्का छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख होइन षडयन्त्रकारी ठान्छ एमाले । आफ्नो पार्टी सिध्याउन लागिपरेको अस्त्र ठान्छ अग्निलाई उस्ले । यति भएपछि अब पुगिहाल्यो नि उस्लाई ।
सभामुख एमालेकोको माग नसुन्ने, एमालेले सभामुखलाई संसद चलाउन नदिने । अनि सरकारले अब खर्च कसरी चलाओस ? के अब सापटी र उद्यारोमा देश चलाउने कि सहमति खोज्ने ? तर केपी शर्मा ओली र उनको टोली सहमतिमा आउने सम्भावना कुनै हालतमा नहुँदा अब देश फेरि एक पटक बजेट होलिडेको नराम्रो चेपुवामा पर्ने पक्का छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्यायो । तर असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेसँगै पुनः वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २५ भदौमा १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित नयाँ बजेट ल्यायो । ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश साउन ३ गतेको संसद्मा पेश भएपछि त्यसको ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्ने थियो । उक्त ६० दिनको अवधि बुधबार सकिए पछि सरकार बजेट होलिडेको अवस्थामा लम्पसार पर्न बाध्य भयो ।
आर्थिक सटडाउनको अवस्था आउनुमा सरकार र एमालेबीच आरोप प्रत्यारोप नै चलेको छ । सरकार दोष एमालेको टाउकोमा थुपार्न चाहन्छ तर एमाले यो सबै सरकारकै करामतका कारण भएको जवाफ दिन्छ । आरोप प्रत्यारोपका कारण विनियोजन विधेयक पारित नभएसम्म सरकारले खर्च गर्ने बाटो कतैबाट पाउने वाला छैन । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक देखिएको यो अवस्थाका कारण अब कुन हदसम्मको आर्थिक दुर्गति भोग्नु पर्ने हो त्यो अगाडि देखिने छ नै ।
एकदमै समस्या परे सरकारी कार्यालयहरूले सापटी र धरौटीमार्फत आकस्मिक खर्च चलाउन सक्छन् । तर यो लाजमर्दो अवस्था पनि हरेक सरकारी कार्यालयले पहिलो पटक भोग्ने भएका छन् । यस्तै कोभिड–१९ महामारी उपचारमा भइरहेका प्रयासमा सरकार स्वयं केही दिनका लागि खर्च विहीन अवस्थामा पुग्ने छ । यस्ले यता पनि जटिलता पक्कै थप्ला ।
यो देशका जनताले बारम्बार संसदीय सर्वोच्चताको अपमान नगर भन्ने आवाज उठाउँदै आए । संसदको मर्यादा कायम गर भनेर बुद्धिजीवीहरु कराएको कराएकै गरे । विमति नभइ सहमतिमा देश चलाउ भनेर विदेशी शुभचिन्तकहरुले समेत भनेको भनेकै गरे । तर सुनेको कहिले हो र ? यही सुन्ने बानी नहुँदा देशले बजेट होलिडेको अवस्था भोग्नु पर्यो । कामना गरौं अब थप यस्ता खाले कुनै पनि होलिडेहरु यो देशले भोग्नु नपरोस ।